Baroordiiq الذين اذا اصبتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعو
Tuesday April 10, 2018 - 10:20:31 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Cabdullaahi Maxamed Cumar, xaaskiisa Ruqiya Xasan iyo carruurtooda oo deggan magaaladaBoltonee dalka Ingiriisku, waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan;
Cabdullaahi Maxamed Cumar, xaaskiisa Ruqiya Xasan iyo carruurtooda oo deggan magaaladaBoltonee dalka Ingiriisku, waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan; dhammaanba tafiirta reerSheekh Muuseoo ku baahsan daafaha caalamka iyoguud ahaanba dadweynaha reerGabiley,iyaga oo ka tacsiyeynaya geerida naxdinta leh ee ku timid, Alle ha u naxariisteexildhibaan Ibraahim Axmed Sheekh Muuse (Ibraahim Kacaan)oo Shalay oo ay bishaAbril9ahayd/2018kaku geeriyoodey magaaladaHargeysa.
Waxayna baroordiiqdaasi si gaar ah ugu dirayaan:ubadkiisii, ooridiisii, walaaladii iyo dhammaanba ehelada kale ee ku sugan dalka Somaliland iyo dibadiisaba.
Waxayna Ilaahay ka baryayaan, in uu Ibraahim geeyo jannadiisa Firdowsa; ehelada iyo asaxaabtana uu samir iyo iimaan ka siiyo.